Wareysi Maxweyne Farmaajo: “Puntland waxay ku hormartay iskutashi” (dhegayso+Daawo) – Radio Daljir
Wareysi Maxweyne Farmaajo: “Puntland waxay ku hormartay iskutashi” (dhegayso+Daawo)
Janaayo 15, 2018 5:10 g 0
Madaxweynaha Dowladda fedraalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo muddo todobaad ah booqasho ku joogay Puntland, ayaa shalay gelinkii dambe soo gunaanaday safarkiisii booqasho ee gobollada Puntland, isagoo haatan socdaal iyo safarro dhulka ahi uga bilawdeen Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo oo wareysi gaar ah oo quseeyey booqashadiisii Puntland siiyey Radio Daljir, ayaa sheegay in uu la kulmay soo dhaweyn ballaaran oo marag-muujin u ah dawladnimo jacaylka dadka iyo dawladda Puntland, taasoo uu xusay in ahayd mid hiddidiilo mudan.
Madaxweyne Farmaajo, wuxuu tilmaamay hormar ballaaran in uu ka muuqdo deegannada Puntland oo dhan, ayna ku jiraan mashaariic xoogleh oo ay ka mid yihiin waddooyin iyo garoomo, kuwaasi oo ku dhismay isku-tashi ay gaareen dadka reer Puntland iyo maamulkoodu.
Cabdifataax Cumar Geeddi oo wareystay ayaa marka hore waydiiyey madaxweynaha safarkiisii Puntland iyo soo dhaweyntii uu kala kulmay.
Madaxweyne Farmaajo oo lagu soodhaweeyey Cadaado (dhegayso)